Previous Article Ụlọ Ọrụ FERMA Amalitela Idozisị Ụfọdụ Ụzọ N'Anambra
Next Article Ụlọ Omebe Iwu Anambra Ebinye Aka n'Amụmà Ego Ọrụ Nke Ahọ 2020
Buusu sị na ọ bụ mmekọrịta ahụ bụ ụtọ nwanne, maka na abụọ nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ. N'ịgbaso nke a, nnukwu ọgbakọ otu ụbọchị nke ngalaba ụlọ ọrụ 'National Cash Transfer Unit, Abuja' ewerela ọnọdụ n'Awka bụ isi obodo steeti Anambra, ma bụrụ nke a nọrọ na ya wee kpọọ òkù ka e nwee ezi mmekọrịta n'etiti gọọmenti etiti na nke steeti dịka o siri metụta ịkwàlite amụma ikesa ego maka nkwalite obibi ndụ, bụ nke a kpọrọ 'Cash Transfee program'.
Nnukwu ọgbakọ ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'obi gọọmenti dị n'Awka, ma bụrụkwa nke dọtara ụfọdụ ndị isi ọchịchị steeti ahụ, ndị isi oche okpuru ọchịchị dị iche iche, ndị minista sitere steeti ahụ, ndị eze ọdịnala obodo dị iche iche, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ e ji okwu ha agba izu na steeti ahụ.
N'okwu mmàlite ya, onyeisi ngalaba 'Conditional Cash Transfer Program' n'ala anyị, bụ Dọkịta Temitọpe Sinkaịya kọwara ya bụ atụmatụ dịka otu n'ime amụmà nkwàlite obibi ndụ gọọmenti etiti ji n'aka ugbua, bụ nke o si na ya enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na ndị o nweghị ka ọ hà ha aka, ma na-adọpụtakwa ụmụ mmadụ n'ụbịam. O kelekwàzịrị ọchịchị steeti ahụ na okpuru ọchịchị dị iche iche na steeti ahụ maka imezùpụta akụkụ nke ha na nkwekọrịta nke amụmà ahụ, ma kpọzie òkù ka a gaa n'ihu inwe ezi mmekọrịta n'etiti gọọmenti etiti na nke steeti.
Na mbụ n'ozi nnọọ ya, nnukwu onye enyemaka pụrụ ichè nye Gọvanọ n'ihe gbasaara amụmà nkwàlite obibi ndụ ụmụ mmadụ, bụ Nwaada Chinwe Iwuchukwu kọwara ọgbakọ ahụ dịka nke dabàrà adabà, n'ilekwàsị anya n'otu ọnọdụ akụnụba ala anyị siri debe imi na ọnụ ugbu a, ma kelekwazie gọọmenti etiti maka ịtụpụta ya bụ ọmarịcha atụmatụ.
Na ntụnye nke ha n'otù n'ótù, onyeisi atụmatụ ahụ na steeti Anambra, bụ Maazị Raphael Enukọrah, na Kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti ahụ, bụ Dọkịta Vincent Ọkpala nke onye nọchitere anya ya bụ Dọkịta John Ndibe kèlere Gọọmenti steeti Anambra n'ezi ọrụ ya n'ịkwàlìtè na isonyèsi ike n'ọmarịcha atụmatụ ahụ na steeti ahụ, ma kwekwa nkwà ịga n'ihu n'ịkwàdo ya bụ atụmatụ, n'ihi na a pụrụ isi na ya wee chụọ ụbịam ọsọ ụkwụ erughị ala na steeti ahụ.
Na nzaghachi, Gọvanọ Willie Obianọ, nke onye nọchitere anya ya bụ osote Gọvanọ, Dọkịta Nkem Okeke kwuru na ọchịchị ya ga-aga n'ihu ime kwesiri na ọ ga-eme, iji hụ na steeti ahụ na-aga n'ihu irita úrù na ya bụ atụmatụ, ọbụnadị dịka o nyere ndụmọdụ ka a kànye ụdị nzùkọ ọzọ, nke ndị ọchịchị steeti ahụ ga-esònye na ya n'ozuzu okè, bụ ebe a ga-anọ wee lebàá anya n'otu a ga-esi me ka ya bụ atụamatụ kawanye mma.
'National Cash Transfer Unit' bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ikesà ego n'okpurù atụmatụ nkwàlite ọnọdụ obibi ndụ, a kpọrọ 'Social Intervention Program' nke ọchịchị Onyeisi ala Muhammadụ Buharị tụpụtara, ma bụrụkwa nke e sikwa na ya wee na-enye ndị ihe na-esiri ike n'ime obodo dị iche iche n'ala anyị ego dị puku Naịra ise kwà ọnwa ọbụla.